ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး - မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများ	သတင်းထောက် အောင်နေမျိုးကို ရဲက ဖမ်း	ပျော်တော်ဆက် သာဂိ - အကောင်းမမြင်သမားရဲ့ ဆွမ်းတော်ခွက်	မောင်ရစ် - ၂၀၁၃ ဘော်စတွန်အကြမ်းဖက်မှု အမေရိကန်တို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ပုံ	ငြိမ်းချမ်းအေး - ဒီမိုကရေစီနည်းကျ သရော်ပါ	ဖိုးစီ (ရုံးတော) - တန်ရာတန်ကြေး	ကာတွန်း ATH - ဒါ ဒို့ နဂါးနီ	ေ အာင်ဝေး- ငါ တို့ဆ က် ချီ တ က် မှ ဖြ စ် မ ယ်ကျော် ကို ကို	ပညာရေး၌ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး	ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) - မိုးသူနှင့် မိုးသောက် ပန်းချီပြပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပလျက်ရှိ	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများလေးသန်းကြီးနဲ့ စကားပြောခြင်း (၂)
မြန်မာလူငယ်တွေဖန်တီးတဲ့ သံလွင်မီဒီယာ - မိတ်ဆက် U Wirathu - အိမ်ကွင်းမှာ မရှုမလှ ရှုံးနိမ့်နေရသော ရွှေဗမာ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း ဟောပြောပွဲ တိုက်ရိုက်လွှင့်မည်
စာပဒေသာ ကောက်စာများမင်းကိုနိုင် - “ ပန်းနုရောင် ဖဲကြိုး ”
Radio Program (82)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (580)
Cartoon Box (1,438)
By admin မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အောက်တိုဘာလထုတ် ထွက်ပြီ၊ (အတွဲ၁၊ အမှတ် ၇၊ ၂၀၁၄) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၄၊ ၂၀၁၄...Read more » Recent CommentsHsu Zin on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများKyaw Mya Gyi on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများDr. Maung Maung Gyi on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများDr. Maung Maung Gyi on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများDr. Maung Maung Than ( Dr. Thiha Maung) on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် တရားခံများသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ